Popular Jewelry | ထူထောင် NYC ရတနာ | Premier အရည်အသွေးရွေးချယ်ခြင်း
google-ပေါင်း instagram ဖန်စီ twitter facebook Pinterest Tumblr Vimeo youtube က အနှုတ် ပိုပြီး ပါးလွှာသော မြှား-လက်ဝဲ မြှားညာ မှတ်ချက်များ rss ပိတ် ဟမ်ဘာဂါ လှည်း - ဗလာ လှည်း - အပြည့် dropdown-မြှား dropdown- မြှား - ညာ ပရိုဖိုင်းကို ရှာဖှေ မြှား - လက်ဝဲ - ပါးလွှာ မြှား - ညာ - ပါးလွှာ စစ်ဆေးခြင်း ကြယ် နောက်ကျော -to- ထိပ် - မြှား ရောင်းချခြင်း မော်ဒယ်တံဆိပ် မြင်ကွင်း -In- အာကာသ ဗီဒီယိုတံဆိပ်
ကျယ်ပြန့် Pendant ငွေကောက်ခံ
Bullion / ဒင်္ဂါးပြား / စုဆောင်း
သတိရအောက်မေ့ / ရုပ်ပုံဆွဲကြိုး
ဘိုင်ဇင်တိုင်း link ကွင်းဆက်
Link Chains ကိုထိန်းချုပ်ပါ
Figaro Link ချည်နှောင်
Franco Link ချည်နှောင်
မိုင်ယာမီကျူးဘား Link Chain
စပါး / ဂျုံကွင်းဆက်
Brooches / တံသင်
Cuff Links များ
ရွှေသွား / ကင်
ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံ / သတိရအောက်မေ့ဆွဲပြား
သတင်း / စာနယ်ဇင်းများတွင်
အမျိုးသား ၀ တ်
အမျိုးသမီး ၀ တ်
Sterling Silver နားကပ်
ပထမ ဦး ဆုံးသဟာယရတနာ
စိန့်မိုက်ကယ် Archangel Pendants
David Pendants of Star
စိန့်ဘာဘရာ (Santa Barbara) ဆွဲကြိုး
စိန့်လာဇရု (San Lazaro) ဆွဲကြိုး
စိန့်မိုက်ကယ်ကောင်းကင်တမန်မင်း (San Miguel) ဆွဲကြိုး
Santa Muerte / ဖှယျ Reaper Pendants
ကျူးဘား Link ကိုလက်ကောက်
Figaro Link လက်ကောက်
Gucci / Mariner Link လက်ကောက်
တင်းနစ် (စိန်လိုင်း) လက်ကောက်
ကျားမျက်လုံး Link လက်ကောက်
Chandelier / Dangle / Drop နားကပ်
တိရိစ္ဆာန် / သတ္တဝါလက်စွပ်
ကျူးဘား Link ကိုလက်စွပ်
အိန္ဒိယကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်လက်စွပ်
Infinity သင်္ကေတ ings လက်စွပ်
လက်ကောက် - လက်စွဲစာအုပ်စက်ထွင်းခြင်း
လက်စွပ် - လက်စွဲစာအုပ်စက်ထွင်းထု
Pendant - လက်စွဲစာအုပ်စက်ထွင်းခြင်း
စိတ်ကြိုက်အမည်လည်ဆွဲ - အမည်ပြား
အမေရိကန်အမှာစာအခမဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်အခမဲ့
နာမည်ကြီးအရည်အသွေး & ဝန်ဆောင်မှု
တပ်ဆင်ထားသည်။ ဇိမ်ခံကား။ အားလုံးအပြုံးများ။
စိတ်ကြိုက် Fine ရတနာ
ပရီမီယံပစ္စည်းများ။ ခြွင်းချက်လက်ရာလက်။ မင်းရဲ့စိတ်ကူး
စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလက်မှုပညာ 1988 ခုနှစ်ကတည်းက
Popular Jewelry- နယူးယောက်မြို့အလယ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး၊ ထူးခြားသောရပ်ကွက်များဖြစ်သော Chinatown၊ Little Italy, SoHo နှင့် Tribeca ဆုံသောနေရာများဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ Popular Jewelry ဒေသတွင်းနှင့်ပြည်ပမှလာရောက်ကြိုဆိုကြသည့်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။
အကောင်းဆုံးအမေ Pendant (14K)
ငါ့ကိုမပန်းပွင့် Ring ကိုမေ့လျော့ကြ၏
Mom's Heart CZ ဆွဲကြိုး (14K)
Filigree Frame "# 1 Mom" ​​Pendant (14K)
Heart Mesh အထည်အလိပ် "# 1 Mom" ​​ဆွဲကြိုး (14K)
"Love You Mommy" ဆွဲကြိုး (14K)
Milgrained လက်ဝါးကပ်တိုင် & # 1 Mom Pendant (14K)
ဆွဲကြိုးနှင့်အတူ Custom ရွှေလည်ဆွဲ
စပါး၊ စတုရန်းဂျုံကွင်း (14K)
ငါ၏အဝမ်းကွဲငယ်ရွယ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သူလုပ်ခဲ့သောကြောင့်သူအလွန်အံ့သြသွားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် popular jewelry!
မိုင်ယာမီ Cubanlink ကွင်းဆက်ငွေ (အဝါရောင်)
Glenn Harris က
Puffy Mariner လှည့်လည်လက်ကောက် (14K)
အံ့သြဖွယ် Pendant / Chain နှင့် Amazing Service 5/5 STARS
ကီဗင်နှင့်ဝီလျံတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဆွဲကြိုးနှင့်ကွင်းဆက်များ (ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်များ၊ ချည်နှောင်မှုများ၊ ဆွဲကြိုးများ၊ အရွယ်အစားများစသဖြင့်) နှင့် ပါတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အထောက်အကူဖြစ်စေပြီးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
သင်သည်လက်ဝတ်ရတနာအချို့ကိုဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေပါကထိုသို့ပြုလုပ်ရန်နေရာဖြစ်သည်။ သင့်မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေကြားပေးပါလိမ့်မည်။ လက်ဝတ်ရတနာများထပ်မံဝယ်ယူရန်ကျွန်ုပ်ပြန်လာပါမည် (ရောင်းချထားသောဆွဲကြိုးများသို့မဟုတ်ကြိုးများအကြောင်းကိုမေးမြန်းရန်မကြောက်ပါနှင့်!)
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအနုပညာရှင်ဆိုင်များတွင်အကြောင်းပြချက်ရှိသည် Popular Jewelry! ကျွန်ုပ်၏ငွေပေးငွေယူချောမွေ့စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေကြားပေးသည့်အတွက် Kevin နှင့် William အားထပ်မံကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Lorenzo V ကို
လူတစ် ဦး အတွက်တောင်မှပိုကောင်း
လည်ပတ်လိုင်းဖြတ်သန်းမှုပုံစံ Silhouette Heart Virgin Mary Pendant (14K)
အပြာရောင် Opal ကွင်းဆက် (ငွေရောင်)
ဖော်ပြထားအတိအကျလာ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ဘဲဥပုံအနက်ရောင် Onyx လက်စွပ် (ငွေရောင်)
ကီဗင်နှင့်ဝီလျံတို့သည်ကြီးကျယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်ကျွန်ပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်မေးမြန်းခဲ့သောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုအလွန်သိရှိခဲ့သည်။ အရည်အသွေးကောင်း၊ အလွန်ကြံ့ခိုင်ပြီးထူးခြားသောလက်မှုလက်ရာဖြစ်သည်။ ဒီဆိုင်ကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်
Diamond Cut Border (14K) နှင့်အတူ Aztec Sun Calendar Pendant
ကီဗင်နှင့်ထိုမိသားစုသည်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သူတို့ကငါအပိုင်းအစနှင့်ပတ်သက်။ ၌ငါမဆိုမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်အလွတ်သဘောခဲ့ကြသည်။ အရည်အသွေးကောင်း၊ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
အပိုင်းအစလှပသည်နှင့်ငါ့မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်။ ပိုပြီး ASAP များအတွက်ပြန်လာ
Jade Buddha Pend (နှင်း / မော့စ်ကျောက်)
တစ် ဦး က $ AP EVA FOREVAAA
ပုံမှန်, အကောင်းဆုံး, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အကောင်းဆုံး။
ဘဲဥပုံ Pinky လက်မှတ်ထိုးလက်စွပ် (14K)
သေးငယ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အလင်းရောင်ကျတဲ့အခါမှာ ထွန်းလင်းတယ်
Tri-Tone ပေါ့ပါးသောစင်ကာပူကွင်း (14K)
အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပိုမိုသောထုတ်ကုန်များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ယူမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသူတို့ကသာယာလှပတယ်လို့ကျွန်မပြောနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ငါအပြည့်အဝအကြံပြုလိမ့်မယ် Popular Jewelry 1000%
Iced-Out Hamsa ဆွဲပြား (ငွေ)
အနက်ရောင်ကြွေပြား Fleur de Lis Pendant (ငွေရောင်)
Larimar ရေဘဝဲဆွဲကြိုး (ငွေ)
[စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းများ] ဆေးထိုးဆေးခြောက်သစ်ရွက်ဆွဲ (14K)
dotted Wings ဆွဲပြား (14K)
Double Heart CZ ဆွဲကြိုး (14K)
Script Jesus CZ Pendant (14K)
255 တူးမြောင်းလမ်း, နယူးယောက်, နယူးယော့ 10013
တစ်ပတ် ၇ ရက်၊ မနက် ၉း၀၀ နာရီ - ည ၆း၃၀
ဇြန္လ 05, 2016 9
ဤတွင်သင်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများတွေ့လိမ့်မည် Popular Jewelry။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောထုတ်ကုန်အသစ်များသို့မဟုတ်အထူးဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကြားရန်မကြာခဏပြန်စစ်ဆေးပါ ...
Facebook က Facebook က
Instagram ကို Instagram ကို
YouTube ကို YouTube ကို
Tumblr သည် Tumblr သည်
Google+ မှာ Google+ မှာ
တုံ့ပြန်ချက် / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Lucky စိန် - Affiliate စတိုး
မီဒီယာ / စာနယ်ဇင်း / ထုတ်ဝေမှုအသွင်အပြင်
New York Knicks - နယူးယောက်နယူးယောက် #NewYorkForever
Highsnobiety - Chinatown Jewell A $ AP Eva သည်လင့်များတွင်သင်ခန်းစာပေးသည်
Awardsdaily.com - 'Wu-Tang: American Saga' အတွက်ဒဏ္Legာရီပုံပြင်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန် Kaela Dobson
Highsnobiety - "ဒီဒေသကဒေသခံ Legend တွေကဘာဂါဗယ်ရီအာသာအနုပညာရှင်ကိုဝတ်ဆင်နေတယ်"
အိမ်ထဲမှအာရှသား - Chiok Va Sam ခေါ်ဒေါ်လာ AP Eva၊ Hip Hop Stars မှ Jeweler
Puma ဘတ်စကက်ဘော - Clyde တရားရုံးခေါင်းစဉ်ပြေး
$ AP Rocky - Fukk Sleep (Official Video) ft FKA twigs
Nike London အတွက် $ AP Eva Martine နှင်းဆီ x
Nike NYC - Gold Pack ဖြန့်ချိခြင်း
ဘီဘီစီကမ္ဘာ့ဝန်ဆောင်မှု - Outlook
HYPEBEAST - တေးဂီတ၏အကြိုက်ဆုံးရတနာနေရာ၏နောက်ကွယ်ရှိတရုတ်မြို့ Doyenne နှင့်တွေ့ဆုံပါ
နောက်ကျောလှန်လှော - ရုံ Browsing - တစ် ဦး $ AP Eva သင်အကြိုက်ဆုံးရက်ပ်ရဲ့ရတနာနောက်ကွယ်မှမိန်းမသည်
New York Times - အိမ်နီးချင်းပူးတွဲ - Hip-Hop နောက်မှလိုက်သောထုံးစံရတနာ
GQ မဂ္ဂဇင်း - နယူးယောက်တွင်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအားပြန်လည်အားဖြည့်ပေးသောဒီဇိုင်နာ ၂၁ ယောက်၊
INSIDER - Hip-Hop ကြယ်ပွင့်များသည်ဤအမျိုးသမီးမှအရောင်ထွက်လာသည်
New York Post - ဤဂရန်းက Wu-Tang Clan မှ Macklemore သို့အဆိုတော်များကိုဖျောက်ဖျက်ပေးသည်
ရေနံချက်စက်ရုံ ၂၉ - #NotYourTokenAsian - နယူးယောက်မြို့တော်၏မြို့တော်ဝန်ကော်နီဝမ်မှ Chinatown တွင်အလုပ်လုပ်သည်
အယူခံဝင်မှု - Iced Out: A $ AP Eva ၏ဒဏ္|ာရီပုံပြင်များ စိတ်ပိုင်း၏နယူးယော့ပြည်နယ်
Great Big Story - Beyonce နှင့် Travis Scott တို့၏ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်တွေ့ဆုံပါ
Apple Daily HK (蘋果日報) - 潮潮大媽
CBS2 NY - Elle McLogan နှင့်အတူတူးခြင်း
ONE37PM - စတိုင် - ဒေါ်လာ AP ရော့ခ်နှင့်ကျောက်စိမ်းများကိုပေးသည့် Downtown Jewellery စတိုး
ရုံးမဂ္ဂဇင်း - A AP AP Eva - အင်တာဗျူး
SinoVision 美国中文电视 - Chinatown ရှိ Rap နာမည်ကြီးလက်ဝတ်ရတနာနေရာ
SinoVision 美国中文电视 - $ AP Eva သည်သင်အနှစ်သက်ဆုံးရက်ပ်ရတနာ၏ရတနာများနောက်ကွယ်ရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး လော她
Courier media - Chiokva 'Eva' Sam: ဟစ်ပ်ဟော့ပ်ရတနာ
သင်သိပါလား? - Popular Jewelry အီဗာ, နယူးယောက် - USA
Zimbio - လီနင်
မူပိုင်ခွင့်© 1988 Popular Jewelry ဒီဇိုင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားသည် ဝီလျံဝမ်
ဝဘ်ဆိုက်ပြIssနာများ? Webmaster ကိုဆက်သွယ်ပါ